Ny angovo gazy voajanahary koa dia miteraka fandotoana | Green Renewable
Manuel Ramirez | | Energie mahazatra
La angovo entona voajanahary dia hita maso tsara hatramin'ny momba azy io solika madio kokoa noho ny arina ary indraindray ampiasaina ho solony voajanahary.
fa tsy dia marina loatra izany laza tsara izany satria toa araka ny tatitra sy tatitra isan-karazany izany, izay anazavana ny fomba famokarana angovo avy amin'ny entona voajanahary fandotoana lehibe rehefa tanterahina ny dingan'ny fitrandrahana azy. Rehefa tena mandoro amin'ny doro mandoro no mazava kokoa satria mazava kokoa ny entona entiny amin'izany fotoana izany.
Mila mitandrina ianao amin'ny ahoana ny lanjan'ny vokatra sasany, satria tsy ny fizarana farany io ihany izay tsy miharihary ny fandotoana vokarina, fa amin'ny fizotrany manontolo. Ny fahatapahan-java-manidina na famonoana hydraulic no fotoana tena mandoto azy indrindra.
Fracking dia misy amin'ny famoronana fisitahana ao anaty vatolampy ka ny ampahany amin'ny entona dia mikoriana mankany ivelany ary azo alaina amin'ny fomba tsara kokoa avy eo amin'ny fantsakana. Ankoatr'izay, ny olana amin'ity rafitra ity dia ny fampiasana akora simika amin'ity ampahany amin'ny famokarana ity izay navotsotra tao amin'ny atmosfera.
Ny iray amin'ireo olana lehibe dia ny mandoto ny rano fisotro ambanin'ny tany sy miteraka famoahana CO2 sy methane, izay manimba ny fiakaran'ny maripana sy ny fiovan'ny toetr'andro. Noho ny fahalotoan'ny rano fisotro ambanin'ny tany dia miharatsy hatrany ny fahasalaman'ny mponina eo akaikin'ireo fitoeram-baravarana ankoatr'ireo fako izay miditra amin'ny rivotra.
1 Solika fôsily
2 Fandotoana amin'ny rivotra amin'ny famokarana angovo avy amin'ny entona voajanahary
4 Ny fandotoan'ny rano anaty rano
6 Ny vokany mety hitranga
7 Lahatsary fanadihadiana momba ny angovo entona voajanahary
8 Mitady mpisolo ny angovo gazy voajanahary
Ny entona voajanahary dia solika fosily, na dia misy ny famoahana eran'izao tontolo izao aza noho ny fandoroana azy tsy izy ireo no maro an'isa ny olana fa raha miteraka arintany na solika.
Mamoaka entona voajanahary 50 ka hatramin'ny 60 isan-jato latsaky ny CO2 rehefa dorana amin'ny ozinina gazy voajanahary vaovao raha ampitahaina amin'ny famoahana hafakely avy amin'ny toby arina. Izy io koa dia mampihena ny gazy avoaka amin'ny habakabaka amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 isan-jato raha oharina amin'ireo ateraky ny motera lasantsy ao anaty fiara.
Aiza izany ny famoahana azy dia hita ao amin'ny fitrandrahana sy fandavahana entona gazy voajanahary avy amin'ny fantsakana sy ny fitaterana azy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana izay miteraka fanivanana methane, entona mahery kokoa noho ny CO2. Ny fanadihadiana savaranonando dia mampiseho fa ny famoahana methane dia 1 ka hatramin'ny 9 isanjaton'ny fitambaran'ny famoahana.
Fandotoana amin'ny rivotra amin'ny famokarana angovo avy amin'ny entona voajanahary
Ny entona voajanahary dia midika fandoroana madio kokoa raha oharina amin'ny lasantsy fôsily hafa, satria mamokatra solifara, merkuriôla ary poti hafa. Ny entona voajanahary mandoro dia miteraka oksida azota, na dia ambany noho ny lasantsy sy ny gazoala ampiasaina amin'ny motera fiara aza.
Trano amerikana 10.000 XNUMX izay miasa Miaraka amin'ny gazy voajanahary fa tsy arintany, ialana amin'ny famoahana setroka misy azota azota 1.900 taonina, SO3.900 2 taonina ary potika 5.200 XNUMX taonina. Ny fampihenana ireo famoahana ireo dia lasa tombony ho an'ny fahasalamam-bahoaka, satria ireo loto ireo dia mifandray amin'ny olana toy ny sohika, ny bronchitis, ny homamiadan'ny havokavoka, sy ny maro hafa.
Na dia misy aza ireo tombony azo, ny fampandrosoana ny entona tsy mahazatra dia afaka misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rivotra eo an-toerana sy isam-paritra. Betsaka ny fandotoan'ny rivotra iainana any amin'ny faritra sasany misy ny fandavahana.
Ny fatran'ny avo lenta amin'ireo loto ireo dia afaka hampiroborobo ny olana amin'ny taovam-pisefoana, aretim-po sy homamiadana.
Ny fanapotehana hydraulic dia teknika hampitomboana ny fitrandrahana solika sy gazy ambanin'ny tany. Hatramin'ny 1947, vaky ny lavadrano 2,5 tapitrisa eo ho eo no niseho eran'izao tontolo izao, anisan'izany ny iray tapitrisa any Etazonia.
Ny teknika dia misy miteraka fantsom-pifandraisana avo iray na maromaro amin'ny alàlan'ny tsindrona rano avo lenta, ka maharesy ny fanoherana ny vatolampy ary manokatra vaky voafehy eo am-pototry ny fantsakana, ao amin'ilay faritra irina ao amin'ny hydrocarbon misy famolavolana.
Ny fampiasana an'io teknika io dia namela hitombo 45% ny famokarana solika hatramin'ny 2010, izay nahatonga an'i Etazonia ho mpamokatra faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Marihina ihany koa fa ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ity teknika ity, izay misy ny fandotoana anaty rano anaty rano, fanjifàna rano be, fandotoana ny rivotra, fandotoana ny tabataba, fifindra-monina entona sy akora simika ampiasaina eny ambonin'ny tany, fahalotoan'ny tany noho ny fihoaram-pefy, ary ny mety ho vokad-pahasalamana azo avy aminy.
Ny iray amin'ireo tranga matotra indrindra amin'ny fracking dia fampitomboana ny hetsika seismika, izay mifandray indrindra amin'ny tsindrona tsiranoka lalina.
Ny fandotoan'ny rano anaty rano
Miaraka amin'ny fanapotehana hydraulic amin'ny fantsakana nahatonga ny fivoahan'ny entona, fitaovana radioaktifa ary metana amin'ny famatsian-drano fisotro.
Misy trangan-javatra anaty rano voarakitra an-drano akaikin'ny lavadrano izay voapoizin'ny tsiranoka mitifitra sy gazy, ao anatin'izany ny metana sy ny fitambaran'ny organika miovaova. Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny loto dia fanamboarana tsy dia vita firy na ny lavadrano mitresaka mamela ny tafaporitsaka ao anaty rano anaty rano.
Ny tsiranoka ampiasaina amin'ny famotehana hydraulic ihany koa nahatratra lavadrano nilaozana, ary koa ny sasany voaisy tombo-kase tsy mety, izay vokatr'izany dia voaloto ireo aquifers ireo.
Ny fracking dia nifandray hetsika seismika avo lenta, fa matetika ny hetsika toy izany dia tsy hita intsony.
Na dia ny fampiasana rano maloto aza rehefa mampiditra azy amin'ny tsindry ambony amin'ny fantsakana fampidirana kilasy II dia mifandray amin'ny horohoron-tany lehibe indrindra any Etazonia. Farafahakeliny ny antsasaky ny horohorontany manana ny haavony 4.5 na mahery dia namely ny afovoan'i Etazonia tao anatin'ny folo taona lasa izay dia niseho tany amin'ireo faritra nitrangan'ny fracking.
Fikarohana vaovao navoaka tamin'ny taona 2016 ary notarihin'ny ekipan'ny geology sy seismologists avy amin'ny Texas Methodist University of South sy the United States Geological Survey, dia naneho fa ny fampidirana rano maloto be dia be miaraka amin'ny fitrandrahana brine avy any ambanin'ny tany amin'ny lavadrano Ny entona mando no mety indrindra nahatonga ny horohoron-tany 27 tsapan'ny mponina ao Azle, Texas, teo anelanelan'ny Desambra 2013 sy lohataona 2014, izay tsy mbola nifandraisan'izy ireo tamin'ny horohoron-tany.
Ny vokany mety hitranga
Ankoatry ny fitomboan'ny horohoron-tany, ny fitambaran'ny akora simika ampiasaina amin'ity teknika ity dia afaka mandoto ny tany sy ny anaty rano ambanin'ny tany, hoy ny British Royal Society tamin'ny 2012.
Azonao atao koa ny mahita taratasy siantifika telo navoaka tamin'ny 2013 izay mifanindry amin'ny fanondroana an'io fahalotoan'ny rano ambanin'ny tany avy amin'ny fracking tsy azo atao ara-batana izany. Ny mazava dia ny hoe raha tsy hitrangan'izany dia tokony hisy foana ny fomba fanao tsara indrindra. Mitranga izany fa tsy izany foana no mitranga, ka misy ny olana goavana amin'ny fandotoana ireo anaty rano anaty rano.
Lahatsary fanadihadiana momba ny angovo entona voajanahary
Misy fanadihadiana maromaro izay ahitanao ny fanoherana mazava mankany amin'ny fracking toa an'i Josh Fox's Gasland. Tamin'izany no nanambarany ny olan'ny fandotoan'ny rano anaty rano manakaiky ireo fantsakana fitrandrahana any amin'ny toerana toa an'i Pennsylvania, Wyoming ary Colorado.
Ny mampihomehy fa lobi-indostrian'ny solika sy solika io nanontany tena ireo nangonina tamin'ny sarimihetsika Fox mba hialàn'ny tranonkalan'ny Gasland ny fitakiana nataon'ny vondrona lobbyista.
Sarimihetsika mahaliana iray hafa koa ny Tany Nampanantenaina., natolotr'i Matt Damon momba ny resaka fanapahana hidrolika. Tamin'ny taona 2013 ihany koa dia natolotra ny Gasland 2, ny tapany faharoa amin'ilay fanadihadiana izay nanamafisany ny sarin'ny indostrian'ny gazy voajanahary, izay anehoana azy ho safidy madio sy azo antoka amin'ny solika, dia tena angano. Manimba ny fiarahamonina eo an-toerana ny famoahana maharitra sy ny fahalotoan'ny rivotra sy ny rano amin'ny farany ary mampidi-doza ny toetrandro noho ny famoahana methane, entona entona manafoana mahery.
Mitady mpisolo ny angovo gazy voajanahary
Tamin'izany rehetra izany dia nilaza ny tsy madio toy izany ny gazy voajanahary araka ny nanandramana aseho azy, fa amin'ny fizotrany dia mamoaka loto mandoto ao amin'ny habakabaka izy rehefa mitranga ny teknikan'ny fracking.
Izany no antony mety hahalalana ny zava-misy izay manodidina ny angovo entona voajanahary sy tohizo hatrany ny fanindriana mafy ho an'ny angovo hafa izay madio tanteraka sy maharitra rehefa mandeha ny fotoana toy ny rivotra na masoandro, izay toerana tsy maintsy alehantsika mba hitandroana ny filaminana sy filaminana hatrany ity planeta ity.
Ireo solika rehetra ireo dia miorina amin'ny ny fôsily dia azo antoka fa hitarika antsika any amin'ny Vovonan'ny toetr'andro any Paris izay firenena am-polony maro no tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra sasany hametraka amin'ny taona ho avy ka ny angovo azo havaozina no tena tanjon'izy ireo.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny vilanin-tsolika voajanahary sy ny fomba fiasan'izy ireo? Aza adino ity lahatsoratra ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Ny angovo gazy voajanahary koa dia miteraka fandotoana
Diana Alvarez dia hoy izy:
Adriana Tiako ny lahatsoratrao ary tiako hampiasaina amin'ny diako ity, azonao atao ve ny mampita amiko ny angon-drakitrao hanoroana anao tsara sy ny daty namoahanao ity lahatsoratra ity. MISAOTRA
Valiny tamin'i Diana Alvarez
vicardig dia hoy izy:
Mpanjifa vaovao ao amin'ny Fracking ao Chiapas, fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny entona voajanahary ary vitsy no mahalala ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amin'ny firenena, na dia mitondra ny "ECO" amin'ny anarany aza izy ireo. Manimba ny toetran'ny firenentsika ny famotehana hydraulic
Valiny tamin'i Vicardiag
ssslabb dia hoy izy:
Ny olana lehibe ho an'ny vondron'olona mpiaro ny tontolo iainana eto amin'ity firenena ity dia ny tsy fisian'ny fiofanana ara-teknika sy ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao amin'ny adin'izy ireo. Zava-dehibe alohan'ny hiatrehana teknika na fitrandrahana loharanom-pahalalana iray, ny fahalalana azy tsara, raha tsy araka ny nolazaiko teo aloha, tsy misy fahasarotan-tsaina ireo adihevitra ary noho izany dia misy dikany.
Ilaina tanteraka ny adihevitra, tokony ho mailo ny fiarahamonina ary tsy hampandefitra ny fampandrosoana ny ho avy ny fampandrosoana ankehitriny, fa ny tsy fahalalana sy ny tahotra kosa tsy mahasakana ny fampandrosoana ankehitriny.
Ny entona voajanahary rehefa dorana dia mamokatra 1/5 amin'ireo famoahana CO2 izay novokarin'ny saribao nirehitra, mazava ho azy fa tsy madio 100% io fa safidy tsara lavitra kokoa.
Diso fa ilaina ny manapaka ny hidy amin'ny famoahana entona voajanahary, mety hitranga amin'ny fomba mahazatra izany raha avelan'ny fitahirizana azy, ary izany dia natao hatramin'izao.
Ary farany, ny famoahana metana tsy voafehy mandritra ny famokarana entona voajanahary dia ezahina ahena faran'izay betsaka araka izay azo atao, mora azo izany, rehefa mandany vola be amin'ny famokarana ny orinasam-pitrandrahana iray, ny zavatra farany tadiaviny dia ny tanjon'ny fikarohana nataonao mandosira anao. Na izany aza, tsy azo ihodivirana izy io indraindray, fa ny fanalefaka ireo zavamaniry mpamokatra kosa dia misy fanilo mirehitra ny metana tafavoaka (tena manimba ary misy vokadratsin'ny trano fonenana avo 8 heny noho ny CO2) ao anaty CO2, miaraka amin'ny fiakaran'ny tranona ambany kokoa.
Ny hafanana manerantany dia olana lehibe tokony harahina, ary ny famoahana entona entona mankany amin'ny habakabaka dia tsy maintsy ahena araka izay azo atao. Raha izaho manokana dia mino ny tetezamita mankany amin'ny fiarahamonina misy ambaratonga ambany sy ambany ny fandefasana gazy karbonika mandra-pahatonganao any 0. Saingy sarotra izany ao anatin'ny fotoana fohy ary ilaina ny henjana amin'ny adihevitra ary diniho ireo maodely mahaliana indrindra.
Mamaly amin'ny ssslabb
Carlos Fabian dia hoy izy:
Mamela ahy i Manuel Ramirez hilaza aminao fa tena tsara ny lahatsoratranao, nieritreritra aho fa tena tsy nandoto ny entona "voajanahary" fa hitako izao fa hafa tanteraka, mampanaintaina ny fomba fanaovana sorona rano, noho izany.
Marina ny momba ny angovo avy amin'ny rivotra, fa misy koa ny maharatsy azy satria rehefa mahita ririnina lava izy ireo dia lany io angovo io, izao dia te hanontany anao aho hoe inona ireo safidy tsy mandoto hafa azontsika ampiasaina?
Mamaly an'i carlos fabian
Misaotra tamin'ny hevitrao Carlos!
Maria Morinigo dia hoy izy:
mikarakara ny tontolo iainana dia mikarakara ny tenantsika
Mamaly an'i maria morinigo
QualityConsulting Consulting dia hoy izy:
Lohahevitra tena tsara sy teboka tsara ... izay rehetra fosily dia tsy ho maitso
Navalin'i Consultoria QualityConsulting
Marina fa gazy voajanahary nefa tsy mampidi-doza (izany no eritreritry ny olona). Saingy solika fôsily izay midika fa lany sy voaloto izy
Daniel Martinez Olivo. dia hoy izy:
Ny famoahana ny lahatsoratra dia tena tsara. Misoratra anarana amin'ny «liam-pirazanana» vitsivitsy liana aho, momba ny fiakaran'ny trano sy ny fiakaran'ny marimaritra iraisana izay misy fiantraikany amintsika rehetra ary amin'ny farany dia hamono antsika tsy hampiato azy io amin'ny fikatsahana harena tsy ho azon'ny olona ny fasana fa hiala izy ho takalony, ny fiaraha-miasa aminy dia manapoizina ny planeta. Izany dia nitarika ahy hampiroborobo ny tetik'asa elektrika manan-danja ao amin'ny Repoblika Dominikanina, manomboka amin'ny fianjeran-dranon'ny ranomasina Karaiba amin'ny alàlan'ny hery misintona amin'ny dingana voalohany amin'ny alàlan'ny tunnels misy turbine fanoherana ny harafesina ambany, ary amin'ny dingana faharoa miaraka amin'ny habetsaky ny rano amin'ny alàlan'ny andalana amin'ny masinina osmosis lehibe mihodina, izay apetraka ao anaty fitehirizan-drano lehibe iray dia hamokatra izany dingana faharoa izany. Ny rano vokarina efa any amin'ny 44 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina (ao amin'ny lohasahan'i La Bahía de Neiba) dia hamokarana sy hampiasaina amin'ny fanjifana sy ny indostrian'ny agro ary koa ny klôroida sy vokatra hafa izay havoakan'ny electrolysis toy ny volamena molekiola, sns. ...
Valiny tamin'i Danilo Martinez Olivo.
Alexander ocampo dia hoy izy:
Tiako ho fantatra hoe iza amin'ireo gazy roa, propane sy voajanahary, no mamokatra gazy karbonika betsaka kokoa rehefa may?
Manontany aho satria nampiasa lasantsy propane vita amin'ny tavoahangy foana ary nifindra tamin'ny etona voajanahary tao an-trano.
Hatramin'ny nifindrako ho an'ny gazy voajanahary dia nahita fofona may aho nahatonga ahy ho vizana, izay tsy nanjo ahy rehefa nampiasa propane aho. Azoko bebe kokoa fa ny monoxide an'ny c. tsy misy fofona izany ... afaka manampy ahy ve ny olona?
Mamaly an'i Alejandro ocampo
Joseph dia hoy izy:
Salama maraina, azonao omena ahy ve ny mombamomba anao mba hahafahako manome anao ny ampahany amin'ny fikarohana nataoko. MISAOTRA
Valiny tamin'i Joseph
ajanony ny fifohana sigara amin'ny laser mandeha dia hoy izy:
Bilaogy mahaliana. Mianatra zavatra amin'ny tranonkala rehetra isan'andro aho. Manentana ny fanahy hatrany ny fahaizana mamaky ny atin'ny mpanoratra hafa. Te-hampiasa zavatra avy amin'ny lahatsoratro amin'ny tranokalako aho, mazava ho azy fa handao rohy iray aho, raha avelanao aho. Misaotra ny fizarana.
Mamaly ny hiala amin'ny sigara miaraka amin'ny laser Travel
Luis Antonio Riano dia hoy izy:
Salama hariva aho manao famotopotorana momba ny fandotoana ny entona voajanahary ary tiako ny lahatsoratrao, azonao omena ahy ve ireo angona mba hizahana ny fanadihadiako
Valiny tamin'i Luis Antonio Riaño
Zaid dia hoy izy:
ok dick tsy nisy nilana ahy izany: v
Mamaly an'i zaid
MARITZA MORALES dia hoy izy:
Manuel Ramírez, tiako ny lahatsoratrao momba ny "angovo entona voajanahary koa dia mamokatra fandotoana" ary tiako izany ary tiako hampiasa azy io amin'ny thesis, azonao atao ve ny mampita amiko ny angonao mba hanondroana anao tsara sy ny daty namoahanao ity lahatsoratra ity. MISAOTRA
Valio amin'i MARITZA MORALES
Inona no atao hoe aeroterie?